Umkami uyinto eyigugu kunayo yonke emhlabeni, ucingo lwami lokugcina, ngisho nomcebo wami omkhulu kunayo yonke. Futhi ukuba naye ezingalweni zami: yonke into ilungile, izwi lakhe lizwakala njengomhlangano ...	Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Okthoba 5, 2019 00: 40 Awekho amazwana
Lokhu kungenxa yesizathu esilula sokuthi thina bantu abamnyama / ama-Afrika yibona abasungule umqondo nomqondo walokho abanye abakubiza ngokuthi "uNkulunkulu" ngokungazi, oku ...	Funda kabanzi
Bheka ngihamba isibhakabhaka ngifuna izitha zami, zizonikelwa kimi futhi ngeke zisakwazi ukungibalekela. "Kufanele sazi amaphutha esitha, kepha ...	Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Julayi 13, 2019 00: 00 Awekho amazwana
UNkulunkulu wadala owesifazane omnyama / wase-Afrika emfanekisweni wakhe kanye nabanye e-technicolor. "Abesifazane abahle kunazo zonke emhlabeni kukhona abesifazane abamnyama / base-Afrika" Oh! Nkosi, noma ngabe uyayithanda noma cha, ...	Funda kabanzi
Kwabansundu / ama-Afrika, athanda ukuthandaza ku-White Christ, nangu lo Khristu wakho omnyama: Ngimnyama, yimi engangikhona futhi obani abazoba umzimba babe ngothuli, kepha umoya ungunaphakade ngikuxwayisile, kepha nina nikholwe ngamanga
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Julayi 7, 2019 00: 00 Awekho amazwana
Ngikukhombisile, kepha ukholwa yinkohliso awazi ukuthi kumele ubone ngamehlo omoya ?? Unamanga uyafihla ufihla imicabango yakho angithi uyazi ukuthi ngi ...	Funda kabanzi
UJesu Kristu uyisibalo sokungaziwa okuningi: ukudunyiswa kukaJesu, ukuhanjiswa ngokuzithandela komuntu, intela, imfashini, umthombo wokuxhaphaza okuhlukahlukene noma iqiniso elingenakugwenywa? … Iqiniso noma amanga? … (VIDEO)
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: May 20, 2019 00: 00 Awekho amazwana
Ukuxhashazwa kobuwula akunakufinyeleleka kwesiwula sokuqala esizayo. "Qeda ukuxhashazwa komuntu ngomuntu futhi uzoqeda ukuxhashazwa ...	Funda kabanzi
Qaphelisa! Qaphelisa! Qaphelisa! Uhulumeni waseCongo ubulala izingane zezwe ezifanele: asisaqondi lutho, engqungqutheleni ephezulu yombuso omongameli, abantu bafa kancane, ikakhulukazi labo abasondelene noma abaqondisi bakaMongameli uFélix … (VIDEO)
March 29, 2020 02: 02